Namoaka Boky Mirakitra ny Tantaran’ny Wikipedia Amin’ny Teny Arabo Ny Wikimedia Am-piposahan’ny Masoandro · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra رامي الهامس Nandika (it) i Daniela De Maria, Gwenaëlle Lefeuvre, Liva Andriamanantena
Voadika ny 20 Avrily 2017 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Aymara, عربي
Ny boky mirakitra ny tantaran'ny Wikipédia ao amin'ny Librebooks.org (Boky maimaimpoana amin'ny teny arabo )
Rakipahalalana tsy mitady tombontsoa mamolavola ny sehatry ny fahalalana rehetra ny Wikipedia ary azo jerena maimaimpoana ao amin'ny aterineto. Mamela amin'ny saika olon-drehetra handinika ny votoatiny izy, satria avy amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ny lahatsoratra rehetra ao aminy. Vatsian'ny fanangonam-bola amin'ny alalan'ny fanentanana ny fikojakojana ny vohikala ara-teknika, izay hangonin'ny Orina Mpanasoa Wikimedia manana ny foibeny ao San Francisco.
Fikambanana iray hafa tsy mitady tombontsoa naorina tamin'ny volana Martsa 2015 ny Wikimedia am-piposahan'ny masoandro ary heverina ho toy ny solontena voalohan'ny mpandray anjara ao amin'ny Wikipedia sy amin'ireo tetikasa mpiara-miombon'antoka aminy any amin'ny firenena fiposahan'ny masoandro miisa efatra : Syria, Libanona, Jordania ary Palestina.
Mikarakara tetikasa sy hetsika maro ny Wikimedia am-piposahan'ny masoandro mba hampahafantarana ny asa, ny tanjona ary ny olona miasa ao amin'ny Wikipedia. Manofana ireo mpilatsaka an-tsitrapo vaovao ihany koa izy amin'ny fanazavana ny fomba handraisana anjara ao amin'ny Wikipedia sy ny fomba fanoratana lahatsoratra. Arafitry ny mpiara-miasa ao amin'ny Wikipedia amin'ny teny Arabo ny fikambanana izay monina any amin'ny firenena am-piposahan'ny masoandro efatra, manana sata ofisialy, ary mandray tsy tapaka famatsiam-bola avy amin'ny Orina Mpanasoa Wikimedia any Etazonia.
Ny fivoarana sasany nisy vao haingana :
Ny Fivoriamben'ny Ar-Wiki (Wikipedia amin'ny teny Arabo ) natao tamin'ny volana Martsa 2016 tao Amman: nampivory olona zato avy amin'ny firenena Arabo sy tsy Arabo miisa roapolo ity fivoriam-paritra ity .
Nokarakaraina tao an-drenivohitra Palestiniana ao Ramallah tamin'ny volana Oktobra 2016 ny seminera ara-teknika, izay natrehin'ny olona Arabo sy tsy arabo am-polony.
Natsangana ny fandaharana fampiofanana ho an'ny mpianatry ny oniversite mba hampianarana azy ireo ny fomba famerenana fandinihana sy fanatsarana ny lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia amin'ny teny Arabo. Anisan'ny oniversite lehibe indrindra tamin'ny fiaraha-miasa ny Oniversiten'i Jordania sy ny Oniversite Hashemita any Jordania ary ny Oniversiten'i Bir Zeit ao Palestina.
Ny boky mitondra ny lohateny hoe “Ny Tantaran'ny Wikipedia”
Tohanan'ny Wikimedia am-piposahan'ny masoandro, heverina ho boky voalohany amin'ny teny Arabo ity famoaham-boky ity, izay mamoaka ny tantaran'ny Wikipedia sy ny iray amin'ireo boky vitsy eto amin'izao tontolo izao momba ny rakipahalalana. Abbad Diraneyya no mpanoratra izany, iray amin'ireo mpikambana mpanorina ny Wikimedia am-piposahan'ny masoandro, sady iray amin'ireo mpandrindra, toniandahatsoratra ary mpanoratra ny Wikipedia amin'ny teny arabo ihany koa. Hivoaka tsy ho ela ao amin'ny Librebooks.org ny bokiny, tranonkala iray tsy mitady tombontsoa izay mamoaka sanganasa amin'ny teny Arabo eo ambany lisansa malalaka sy maimaimpoana. Mirakitra toko iraika ambin'ny folo ny boky ary ahitana lohahevitra isan-karazany mifandraika amin'ny Wikipedia.
Noho izany ity boky ity dia mamolavola ny lafiny fandroson'ny asa ao amin'ny Wikipedia, ny dingana fanoratana ny lahatsoratra, ny fanadihadihana ny loharanom-baovao sy ny fandinihana indray ny votoaty mba hahazoana antoka fa mifanaraka ara-akademika sy ara-tsiansa izany. Ahitana ihany koa ny fandinihana ny olana mampiady hevitra sasany toy ny tsy fiandanian'ny Wikipedia na amin'iza na amin'iza sy ny marina momba ny fanazavana ao amin'ny lahatsoratra momba ny lohahevitra saro-pady izy. Misy toko iray natokana ho an'ny politikan'ny famatsiam-bolan'ny Orina Mpanasoa Wikimedia ao, ary manadihady ny fomba nahazoana, ny fizarana ary ny fampiasana ny fanomezana. Miresaka momba ny famoronana dika mitovy amin'ny Wikipedia amin'ny fitenim-paritra Arabo sy ny fomba hanatanterahana azy io ihany koa izy ity.
Farany, manao famelabelarana mikasika ny fikambanana sy ny tetikasa izay tohanan'ny Wikipedia sy ny ezaka rehetra ataon'ny mpiara-miasa ao amin'ny Wikipedia monina any amin'ny firenena Arabo ny boky. Hita ao ny fitanisana ny lisitry ny zaikabe, ny fivoriambe sy ny fandaharan'asan'ny fiaraha-miasa izay nandraisan'ireo mpiara-miasa anjara tany amin'ny faritra Arabo tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Nosoratana tamin'ny alàlan'ny hafatra nalefan'ny Wikimedia am-piposahan'ny masoandro ho an'ny Global Voices ity lahatsoratra ity.
Nandika (it) i Daniela De Maria